Our History - Jiangsu Yongxiang Haydarooliga Co. Ltd
Kooxda Production Dhisay
Si aad u adeega macaamiisha fiican, 2008, Yongxiang dhisay koox soo-saarka iyo ganacsiga kala duwan qaybaha Haydarooliga iyo dhululubada sameeyo, processing, iibka iyo adeegga.
Iyadoo horumarinta ganacsiga, warshadda kiro ah mar dambe ku kulmi karaan wax soo saarka iyo maamulka dalabaadka. Yongxiang dhisay ay dhirta iyo xafiiska dhismaha gaar ah. Oo waxaa lagu shubaa isticmaalka on 2011.
Si loo kordhiyo tayada wax soo saarka, Yongxiang iibsaday xarunta 1aad CNC mashiinka ee 2015. In ka sano ee soo socda, qalab badan oo horumarsan ayaa laga leeyahay si kor loogu qaado xoog shirkadda.
Dhexdhexaadka Samee Up
Helidda agagaarka saldhigga ah ee Shiinaha Electronic Warshadaha, si ay u sameeyaan isticmaalka ugu wanaagsan ee this faa'iidooyinka dabiiciga ah, Yongxiang aasaasay hoosaad Haimante Electronic Co., Ltd ee 2017.
Si loo hagaajiyo tayada iyo wax soo saarka, Yongxiang bilaabo in la isticmaalo technology robotics soo saaridda. Ka dib markii debugging iyo orodka, robot Gacanta 1-dii waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in processing qaybaha kala iibsiga.